Chii Chingaita Kuti Undiudze Nezve SEO yePair Management Company?
Mazuva ano, SEO inokosha kumarudzi ose emabhizimusi ekuIndaneti, uye nzvimbo yekuchengetedza pfuma yepaIndaneti haisi yega. Kana iwe uchida kukura nekambani yako yekugadzirisa kambani, saka yakakurudzirwa zvikuru kuti iwe unosanganisira SEO mune yako digital marketing marketing.
At Semalt, tinogara tichiri kushanda nezvemazano akanaka ekutengesa webhudziro rebhizimisi rekuchengetwa kweimba. Nhasi, tichagovera nzira dzakanakisisa dzekusimudzira SEO yako. Izvi zvinokurudzira zvichakubatsira kuti uchinje vashanyi vepawebhusayithi kuti vatungamirire.
Cherechedza Menyu Yenyu Zvinhu
Chinhu chokutanga chatinoda kutaura pamusoro payo ndechekushandura peji yako kana mune mamwe mashoko mauri menyu. Yeuka, inoda kuva yakachena, yakajeka uye yakananga. Nzira yakanakisisa yekuronga mapeji ako epamberi pekugadzirisa kuisa mukati maro mana yemenyu. Nyanzvi dzeSimalt dzinoratidza kuisa zvinotevera pane peji iri mberi:
Chinangwa chekutanga apa ndechekusimudzira chitima chako nekuderedza kuwedzera kwekuwedzera uye kuwedzera nguva inoshandiswa pawebsite yako. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kune vanhu vazhinji vanoshanyira nzvimbo yako zuva rega rega. Vose zvavo vanoda kuti zvive zvakanaka uye zviri nyore kufamba. Ndokusaka zvakakosha kupa vashandisi zviri nyore. Yeuka, kana iwe ukashandisa chero mukana kune imwe nzvimbo inodiwa yewebsite, kune mikana yakareba yokuti vachapedza nguva yakawanda ikoko panzvimbo yekusiya zvishandiso zvako.
Kana iwe uchida kuisa zvimwe zvinhu zvemenyu, zvakadai sehukama hwehupenyu, ndizvo zvakanaka. Chinhu choga chaunofanira kuyeuka: edza kuchengeta zvinhu izvozvo pane mamwe ma-menus mukati mewebsite yako. Sezvatakataurwa pamusoro apa, peji rako rekutanga rinofanira kuva rakajeka uye rakaoma kufamba, sezvinobvira.
Maumbirwo ebhuku re URL
Kukurudzira hurongwa hwe URL hwemaji webhusaiti nguva dzose huri chisarudzo chikuru. URL dzako dzinofanirwa kunge dzakanyatsotsanangurwa uye dzinotsanangurwa. Ramba uchifunga kuti kana URL dzako dzichiita zvinonzwisisika uye dzichiratidza kukosha kwekambani yako, injini dzekutsvaga dzinogona kukuwana iwe nekukurumidza uye unowana nyore SEO kukurudzira.
Ongorora Pamunzvimbo Yenyu Page
Zvakakodzera kutaura kuti mikana yako yebhizimisi yakawanda inopinda kubva peji ino. Saka, iwe unofanirwa kuzviita zvakanakisa. SEO nyanzvi dzinotsanangura zvinhu zvitatu zvaunofanira kuva nazvo peji ino kuita kuti pamba yako yekambani ikwanise kubva kuvanhu. Pano ndeiyi:
Kunyange zvazvo izvi zvingaita sezviri pachena, iwe ungashamisika kuti mapeji akawanda ekutenderera haana mazita, ayo akaipa. Ngatiti iwe uri kambani yekuchengetedza pfuma muFlorida, ipapo zita reSeO-rakagadziriswa reji rekutsvaga kwako rinofanira kuva chinhu chakafanana neFlor Property Property Management Agency.
Visible Nhamba yeNhare
Vavengi vako vanotarisira vanoda kukukwanisa kusvika kwauri nokukurumidza, saka iva nechokwadi chokuti nhamba yefoni zvinooneka. Usazvivanza, pane kuzviisa pasi pasi pezita rako, kuitira kuti vanhu vagone kupinda mukati mako munyaya yemasekondi.
Zvakakosha kupa vashandisi neimwe nzira kunze kwefoni yavanogona kuitanidza newe. Funga fomu yekubatana ne4-5 minda. Kumbira vaenzi kuti vawane ruzivo rwakakosha, saka zviri nyore kwavari kuti vape ruzivo rwavo.
Unogona kutanga kutanga kusimbisa webhusaiti yako yekambani yekuchengetedza pfuma ikozvino nematatu aya SEO. Kana wapedza kuita navo, unogona kuenda mberi nekuwedzera uchapupu uye kuisa sangano rako pavhidhiyo inotsanangurwa Source .